Xubin ka tirsan 20-kii xildhibaan ee Ahlu-Sunna ugu jirtay baarlamaanka Galmudug oo is-casilay – Hornafrik Media Network
Shaacir Sheegow Maxamed oo mid ahaa 20-kii xildhibaan ee Ahlu-Sunna ugu jirtay baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa iska casilay xubinimadii baarlamanka Galmudug.
Shaacir Sheegow ayaa isaga oo ku sugan dalka Ingiriiska, waxa uu galabta shaaciyey in istaqaaladiisa uu horay ugu gudbiyey beeshiisa oo uu ku metelayey kursigaas, isla markaana ay ka aqbaleen, isagoo xusay in ay soo magacaawdeen ninkii ku meteli lahaa kursigaas oo lagu magacaabo Axmed Yuusuf Maxamuud.
“Aniga oo ah Xil. Shaacir Sheegow kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, waxaan halkaan idin kugu soo gudbinayaa, is casilaadeyda iyadoo aysan cidna igu qasbin, waxaana xilkaas horay la’iigu igmaday soo celiyey aniga oo raali inka ah, waxaana jira duruufo ii gaar ah oo aana xilligan u guda karin xilkaas”ayuu Shaacir Sheegow ku yiri qoraal uu soo saaray.
Qoraalka oo intaa sii raaciyey, “Kadib markii aan la socod siiyey beesha aan ka dhashay iyaguna waa iga aqbaleen, waxayna isla garteen in xilkaas ay u soo magacaawdaan Axmed Yuusuf Maxamuud”.
Sida ku cad qoraalka uu soo saaray xildhibaanka is-casilay ee Shaacir Sheegow ninkii bedeli lahaa waxaa soo magacaabatay beeshiisa, waxaana xusid mudan in kursiga uu baneeyey ay soo xuliddisa qoondo ahaan u heleen Ahlu-Sunna Waljamaaca oo 20 xubnood laga siiyey baarlamaanka Galmudug.
Shaacir Sheegow Maxamed ayaa wixii ka dambeeyey markii loo dhaariyey xilkaan, waxa uu ganafka ku dhiftay siyaasadda Ahlu-Sunna, waxuuna ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka ee soo doortay Madaxweyne Qoor-Qoor, iyadoo ay xusid mudan tahay in markii laga reebo isaga aysan kulamada baarlamaanka soo xaadirin xildhibaandii kasoo galay dhanka Ahlu-Sunna.
Hoos ka aqriso warqadda is-casilaadda